थुलुङभाषी नानीहरुप्रति लीलामायाँको मायाँ : रक्सी बेचेको पैसाले १५ जनालाई कपडा - Hamrokhotang
Home » Serofero » थुलुङभाषी नानीहरुप्रति लीलामायाँको मायाँ : रक्सी बेचेको पैसाले १५ जनालाई कपडा
थुलुङभाषी नानीहरुप्रति लीलामायाँको मायाँ : रक्सी बेचेको पैसाले १५ जनालाई कपडा
By: HamroKhotang.com on Saturday, September 08, 2018 /
भदौ–२३, सोलुखुम्बु, सल्यान, देउपुजेमा पापा दिल बहादुर राई र आमा जसरुपा राईको कोखमा २०२४ सालमा जन्मेकी हुन् लिलामाया थुलुङ राई । तत्कालीन पञ्चायती सरकारको विभेद, असमानता, अशिक्षा, गरिबी जस्ता विविध कारणले कक्षा २ भन्दा बढी पढ्न पाइनन् । पढ्ने उत्कट चाहाना हुँदाहुँदै पनि घाँसदाउरा, मेलापात गर्दै बाल्यकाल बित्यो ।
पहाडमा जत्ति दुःख गर्दा पनि सुखका दिन फिरेन । अन्ततः बुढाबुढीले सल्लाह गरे । सुखका दिन फिर्ने सपना बुन्दै भिम बहादुर विदेशतिर लागे । सपना देख्ने युवाको जाने ठाउँ नै कहाँ छ र ? भिम बहादुर अपवाद् रहेनन् । केही वर्षपछि सपनाले तान्दै लिलामायालाई पनि ललितपुर स्थित् इमाडोल ल्याईपु¥यायो । मसिना नानीबाबु च्यापेर लिलामाया इमाडोल आइपुगिन् । तर गाउँ जस्तो इमाडोल थिएन । इमाडोल जस्तो गाउँ हुने कुरै भएन । केही समय लिलामाया अलमल्ल परिन् । तर लिलामाया हरेस् मान्ने खालकी थिइनन् । मात्र २ कक्षा पढेकी लिलामायालाई संघर्ष गर्न कसैले सिकाइरहनु पर्दैन थियो ।
थुलुङ राई भाषा बोल्न जान्ने सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगाका पन्ध्र जना मसिना स्कूले नानीहरु यतिबेला काठमाडौंमा छन् । थुलुङ राई भाषाको बालगीति एल्बममा स्वर भर्नका निम्ति उनीहरु काठमाडौं आएका हुन् । थुलुङ राई भाषा पाठ्यक्रम विकास समितिले उनीहरुलाई किराती पहिचान झल्किने एकसरा कपडा किनिदिन खोजिरहेको थियो । यो कुरा थाहा पाए पछि लिलामायाले आफ्नो श्रीमान भिम मार्फत् खबर पठाइन् ।
“रक्सी बेचेको केही पैसा मसँग छ । त्यही पैसाले नानीबाबुहरुलाई म एकसरा लुगा किनिदिन्छु । मैंले पढ्न नपाए पनि नानीबाबुहरुले धेरै पढुन् । प्रगति गरुन् । त्यत्ति लुगा त म किनिदिन सक्छु नि ।” चिण्डो फेसनबाट कपडा खरिद गरी नानीबाबुहरुलाई लिलामायाले हस्तान्तरण गरिन् । नानीबाबुको प्रगतिको कामना गरिन् । आशिर्वाद दिइन् ।
यहींनेर एउटा कुरा नि जोडौं । जाँड, रक्सी पकाएको, बेचेको नाममा कैयौं पटक लिलामायाले नेपाल सरकार (प्रहरी) को हप्किदप्कि खान परेको छ । आदिबासी किरातीले जानेको परम्परागत सीप यही हो । यही सीपको आधारमा यसो दुःखजिलो गरेर आदिबासीहरु बाँचिरहेका छन् । आदिबासीको सीपलाई प्रमोट गर्दै नेपाल सरकारले अन्तराष्र्टि«यकरण गरेर व्यापार बढाउने/बिदेशी पुँजी भित्राउने नीति लिनुपर्नेमा पूरै निषेध गरिरहेको छ । लिलामाया र लिलामाया जस्ता कैयौं आदिबासी महिलाले दुःखले पकाएको रक्सीलाई बुटले भकुण्डो खेलाएर नेपाल सरकार फाइभ स्टार होटलमा महँगो विदेशी रक्सी पिइरहेको छ ।
आफ्नो देशको सीप र श्रमलाई प्रमोट नगरी संसारका कुनै देश उँभो लागेका छैनन् । नेपाल सरकारको यस्तो चालाले कसरी देश उँभो लाग्छ ? मानसपटलमा प्रश्न घुमिरहन्छ । प्रस्तुति : खुक्सङ खम्बु ( थुलुङ राई भाषा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका संयोजक खम्बु सांस्कृतिक अभियन्ता तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)